1 taona 1 volana lasa izay - 1 taona 1 volana lasa izay #1124 by Optimizator
Salama! Manana olana roa amin'ity fiaramanidina ity aho. After normal mandeha ho azy fametrahana ao FSX SP2, ny modely fiaramanidina modely rehetra TSY MANOTANA VOLA ?? Ara-dalàna ny farango.
Ary ny simulator dia mitatitra fa tsy misy ny feo!
Fanovana farany: 1 taona 1 volana lasa izay by Optimizator.
Manaraka mpisera (s) nanao hoe: Misaotra: Jandirk
1 taona 1 volana lasa izay #1127 by Camo6152
Navoakako ilay fonosana mitovy.
Rehefa mandeha misafidy ny iray ATR aho amin'ny "fiaramanidina fiaramanidina" dia afaka mahita azy ireo any aho, fa rehefa nokasihiko ny bokotra "Sidina izao" FSX Lozam-pifamoivoizana.
Izay rehetra fanampiana dia ho ankasitrahana
1 taona 1 volana lasa izay #1128 by Camo6152
Amin'ny alàko dia nandefasako ilay fonosana amin'ny fomba ankasitrahana ary nofafako ny lalan'ny Steam.
1 taona 1 herinandro lasa izay #1175 by flaps1262
Ny Watches of Torque sy Hp dia mijanona ao amin'ny cero amin'ny fotoana rehetra.
1 taona 1 herinandro lasa izay #1176 by rikoooo
Eny, olana mahazatra io izay hita ao amin'ny 2D Panel ihany, tsy nahita lamandy aho amin'izao fotoana izao, ary ny rehetra dia afaka manampy ahy hahita vahaolana.
Manaraka mpisera (s) nanao hoe: Misaotra: flaps1262
Fotoana mamorona pejy: 0.792 segondra